İBB Darawalka Tareenka Ayaa Sameyn Doona Shaqaalaynta Shaqaalaha! | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulİBB Darawalka Tareenka Ayaa Sameyn Doona Shaqaalaynta Shaqaalaha!
19 / 11 / 2019 34 Istanbul, Shaqooyinka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
darawalka tareenka ibb wuxuu sameyn doonaa shaqaale iibsan
İBB Darawalka Tareenka Ayaa Sameyn Doona Shaqaalaynta Shaqaalaha! Loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Magaalo Xeebeedka Istanbul PageBB Bogga Xirfadda Waraaqo shaqo oo cusub ayaa la soo mariyaa. Mid ka mid ah xayeysiinta shaqaalaysiinta ee qof kasta uu si aad ah u raaco tareenka tareenka shaqaaluhu waxay ku sugnaayeen soo dhaweynta. Baaqa shaqaalaysiinta ee lagu daabacay bogga Xannaaneynta IMM, shuruudaha codsiyada ee musharraxiinta ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay.
IIM KASOO SAARAY IN QOFKA UU KUU SAMEEYEY
Baaqa shaqaalaysiinta ee ay soo saartay IMM, “Train Driver eden oo dagan dhanka Yurub ee Istanbul waa la shaqaaleysiin doonaa.” Intaa waxaa dheer, ”Iyada oo la raacayo jadwalka dhaqdhaqaaqa la go'aamiyay, in la isticmaalo gawaarida gaadiidka dhulka hoostiisa ku jira lana hubiyo in gaadiidku sii socdo. Waxaan raadineynaa asxaab aad ugu jecel magaalada Istanbul Dı
TILMAAMAHA TILMAAMAHA BAARLAMAANKA EE PERSONNEL Ogeysiiska
Ogeysiiska shaqaalaysiinta ee lagu daabacay bogga Xannaano-maalmeedka IMM, codsadayaasha looga baahan yahay inay codsadaan ugu yaraan waa kuwa ugu yaraan qalin-jabinta Dugsiga Sare ee Farsamada ama Iskuullada Xirfadaha; Koronto-Elektaroonigga, Gawaarida, Gawaarida, Teknolojiyada Macluumaadka, Kombiyuutarka, Nidaamka Tareenka, Mechatronics, Automation, Waaxaha farsamada ayaa looga baahan yahay inay qalin-jabiyaan.
Intaas waxaa sii dheer, shuruudaha soosocda ayaa ku taxan shuruudaha codsadayaasha:
Inaad haysato ugu yaraan liisanka darawalnimada wadista 'B',
Wuxuu dhammeystirey howlihiisa militariga ee musharrixiinta ragga ah,
Wax carqalad ah oo ku yimaadda shaqada la beddelo,
MUXUU YAHAY LACAG LA'AANTA BIXIYAHA JAMHUURIYADA?
Bogga Shaqada ee İBB ee lagu daabacay ku dhawaaqista shaqaalaysiinta ee tirada mushaharka darawalka tareenka ma qoro mushaharka darawalka tareenka, tusaale ahaan ugu yaraan 4 kun oo rodol iyo 6 kun oo rodol ayaa loo yaqaan inay isbeddelaan. (Kamupersonel ah)
Shaqo qorista shaqaalaha TCDD ee 2019 Sanadka ayaa sii socota iyadoo mushaaraadka shaqaalaha sanadkan sidoo kale ay yihiin kuwo cajiib ah. Sanadka 2019 Waa maxay mushaarka shaqaalaha TCDD markay tahay waajib?
Shaqaalaha Agaasinka Guud ee Tareenka dhulka ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan 2019 waxayna helaan mushaharka iyadoo loo eegayo cabirka mushaharka ee la go'aamiyay. The Republic of Turkey State Tareennada mushaaraadka shaqaalaha fasalka iyo Seniority waxaa lagu daray on go'aaminta mushaharka asaasiga ah. Mushaaraadka shaqaalaha 2019 Shaqaalaha Tareenka Waddooyinka waa sida soo socota.
Sida ku xusan qiyaasta mushaharka aasaasiga ah ee la daabacay; Maareeyaha Kaaliyaha Saldhigga ugu Weyn, Maamulaha Injineerka, Dhakhtarka, Lataliyaha, Qareenka, Maamulaha, Madaxa Xarumaha Qaadashada, Maareeyaha Kaaliyaha Qaadashada-Kumeeliyaha, Dhakhtarka Takhasuska ah, Injineerka Khabiirka, Madaxa Dayactirka Jidadka, Kaaliyaha Maareeyaha Wadooyinka Wadooyinka, Kaaliyaha Maareeyaha Wadooyinka, Madaxa Qeybta Wadooyinka. Tareennada State ee Jamhuuriyadda Turkey, dadka kuwanu waa shaqaalaha ugu mushaharka badan.
Waa maxay mushaharka shaqaalaha cusub ee TCDD?
Mushaharka saafiga ah ee mushaharka tareennada Gobolka cusub ee la qorey: £ 5750 bixisay agagaarka.
Mushaharka saafiga ah ee injineerada dhowaan la shaqaaleysiiyay ee Tareenka Gobolka: £ 5600 bixisay agagaarka.
TCDD mushaharka tarjumaan cusub ee mushaharka ah: £ 5200 bixisay agagaarka.
Mushaharka saafiga ah ee shaqaalaha cusub ee shahaadada koowaad ee shahaadada qaatay ee Tareenka Gobolka: £ 4400 bixisay agagaarka.
Mushaharka shahaadada jaamacadeed ee TCDD ee dhowaan la shaqaaleysiiyay: £ 4350 bixisay agagaarka.
TCDD Mushaharka dugsiga sare ee dhowaan la shaqaaleysiiyay: £ 4150 bixisay agagaarka.
Mushaharka farsamada ee saqafka Railways-ka Gobolka ee dhowaan la shaqaaleysiiyay: £ 4900 bixisay agagaarka.
Mushaharka saafiga ah ee lataliyaha cusub ee Tareenka Gobolka: £ 4700 bixisay agagaarka.
Mushaharka saafiga ah ee farsamoyaqaannada dhowaan la shaqaaleysiiyay ee Tareenka Gobolka: £ 4500 bixisay agagaarka.
TCDD Wagon farsamada mushaharka saafiga ah: £ 4650 bixisay agagaarka
TCDD Ugu yaraan Qalinjabinta 363 Sarkaalka Shaqada Shaqaaleynta…
Gaadiidka TCDD Co. Shaqaalaysiinta shaqaalaha ee fromKUR…
Shaqaalaha Farsamada Farsamada Gawaarida TCDD…
PageBB Bogga Xirfadda
Iibsiga Darawalka Tareenka İBB
Shaqaaleynta Shaqaale-ka-Shaqeynta Tareenka IMM
soo dhoweynta darawalka tareenka
shuruudaha shaqaaleynta ee darawalka tareenka
Shaqaalaha Tareenka Wadayaasha